I-Revised Rainbow Cup izoqala kule mpelasonto | Scrolla Izindaba
Obekufanele kube ngumncintiswano phakathi kwamaqembu aqhamuka e-Ireland, e-Italy, e-Scotland, e-Wales naseNingizimu Afrika, kepha imikhawulo yezokuvakasha ye-Covid-19 ikuqedile lokho.
Uhlelo olubukeziwe lubona amaqembu e-SA franchise esebenza, kusukela ngempelasonto ngokuhlangana eKapa nasePitoli.
I-SA Rugby ne-PRO14 Rugby zimemezele imidlalo nezichibiyelo ezichitshiyelwe ze-PR014 Rainbow Cup SA futhi ziqinisekisa ukuthi le midlalo izoba bukhoma ku-Supersport TV.
Umdlalo wokuvula kuzobe kudlala i-DHL Stormers ne-Cell C Sharks e-Cape Town Stadium ngoMgqibelo ntambama. Lokhu kuzolandelwa yi-Jukskei Derby phakathi kwe-Vodacom Bulls ne-Emirates Lions e-Loftus Versfeld ebusuku.
“Kuyadabukisa ukuthi asikwazanga ukuba nomncintiswano njengoba besiwuhleli okokuqala,” kusho isikhulu se-SA Rugby uJurie Roux.
“Kodwa ukubona la maqembu amane edlala emasontweni ayisikhombisa nakanjani kuzokhipha okuhamba phambili ebholweni lombhoxo waseNingizimu Afrika.”
UMqondisi we-Rugby, uRassie Erasmus, obebona i-Rainbow Cup njengethuba lokuzilungiselela uhambo lwaseBrithani nase-Irish Lions, uthe bekungaba kuhle ukubona amaqembu aseNingizimu Afrika ethatha amandla ebhola lombhoxo lase-Europe.
“Kepha okwamanje sinomncintiswano onzima esithemba ukuthi uzolungiselela abadlali i-series enkulu lapho bezobhekana khona neBritish ne-Irish Lions,” esho.
Umthombo wesithombe: SA Rugby